कंगना रनौतको समर्थनमा आए शत्रुघ्न सिन्हाः भने, ‘उनको सफलतासँग डाहा गर्नेहरु मात्रै उनीविरुद्ध खनिएका छन्’
Homeमनोरञ्जनकंगना रनौतको समर्थनमा आए शत्रुघ्न सिन्हाः भने, ‘उनको सफलतासँग डाहा गर्नेहरु मात्रै उनीविरुद्ध खनिएका छन्’
एजेन्सी । सुशान्त सिंह राजपूतलाई न्याय दिलाउनका लागि लडिरहेकी कंगना रनोटले बलिउडका दिग्गज कलाकार शत्रुघ्न सिन्हाको समर्थन पाएकी छिन् । उनलाई विश्वास गर्ने हो भने जो व्यक्ति कंगनाविरुद्ध बोलिरहेका छन्, उनीहरु वास्तवमा उनको असफलतासँग डाहा गर्छन् । शत्रुघ्नले यो दाबी एक न्यूज च्यानललाई दिएको अन्तरवार्तामा गरेका हुन् । यतिबेला उनले बलिउडको एउटा समूह क्षमतावान् आउटसाइसर्डविरुद्ध सामूहिक रुपमा उत्रने गरेको पनि बताए ।
कंगनासँग के को रिस ?
रिपब्लिक टिभीसँगको कुराकानीमा शत्रुघ्नले भने, ‘मैले धेरैजसो मानिसहरुले कंगनाविरुद्ध बोलिरहेको देखेको छु । किनभने उनीहरुलाई कंगनाको सफलतासँग डाहा छ । हाम्रो दया बिना, हाम्रो इच्छा विपरित, हाम्रो समूहमा समावेश नभइकन र कसैको पनि आशिर्वादको साहारा बिना यो केटीले यति धेरै हासिल गरेकी छिन् कि मानिसहरुको उनको सफलता र बहादुरीसँग डाहा गर्न थालेका छन् ।’
‘कफी विद करन’ माथि निशाना साँधेः
शत्रुघ्नले उक्त अन्तरवार्तामा करन जाहेरको च्याट शो ‘कफी विद करन’ माथि पनि कटाक्ष गरेका छन् । उनले भने, ‘हाम्रो पालामा ‘कफी विद करन’ जस्ता केही पनि थिएन । यस्तै नियोजित कार्यक्रमका कारण विवाद पैदा हुन्छ । अहिले जुन मानिसहरुको कुरा भइरहेको छ, उनीहरु हाम्रै समाजका सदस्य हुन् । तर फिल्मी उद्योग कुनै एक व्यक्तिसँग सम्बन्धित हुँदैन जसमा केही मानिसहरुले यसलाई बोयकट गर वा यसलाई यहाँबाट निकालौं भन्ने गर्छन् । तपाईंहरु यसो भन्ने को हो ? तपाईं यो उद्योगमा कसरी आउनुभएको छ र तपाईंले आफ्नो जीवनमा के नै गर्नुभएको छ ?’
कंगनाको विरोध गर्नेमा शत्रुघ्न सिन्हाकी छोरी पनि थिइन्ः
शत्रुघ्न सिन्हाकी छोरी सोनाक्षी सिन्हा लगातार ती व्यक्तिलाई साथ दिइरहेकी छिन् जो कंगनाको विरोधी गरिरहेका छन् । १४ जूनमा सुशान्त सिंह राजपूतले आत्महत्या गरेका थिए । जब कंगनाले यसका लागि बलिउडमा फैलिएको नेपोटिजमलाई जिम्मेवार देखाइन् र करन जोहरमाथि निशाना साँधिन् तब सोनाक्षीले नाम नलिइकनै उनलाई टार्गेट गरेकी थिइन् ।
सोनाक्षीले आफ्नो ट्वीटमा लेखेकी थिइन्, ‘यस्ता मानिसहरुले आफ्नैको मृ त्युको आडमा आफ्नो प्रचार गर्छन् तर अब यो सब बन्द हुनुपर्छ । तपाईंको नकारात्मकता, घृणा र विष कसैलाई पनि चाहिएको छैन । जो यो संसारबाट बिदा भएका छन्, तपाईं उनको सम्मान गर्नुहोस् ।’ पछि जब उनलाई ट्रोल गरियो तब उनले आफ्नो ट्वीटर अकाउन्ट नै डिलिट गरिदिएकी थिइन् ।
केही दिन अघि तापसी पन्नूले कंगनामाथि सुशान्तको मृ त्युको प्रयोग नीजि बदलाका लागि गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । तब सोनाक्षीले उनको तारिफ गरेकी थिइन् । उनले लेखेकी थिइन्, ‘तिमीमाथि गर्व छ तापसी । जुन गरिमा, परिपक्वता र इमान्दारीले तपाईंले जवाफ दिनुभयो त्यसका लागि म तपाईंको सम्मान गर्छु र आशा गर्छु कि अन्य मानिसहरुले पनि यस्तै गरुन् । तिमीलाई थप ऊर्जा मिलोस् ।’
वास्तवमा, कंगनाले एक अन्तरवार्तामा तापसी पन्नू र स्वरा भास्करलाई बी ग्रेड नायिका भनेकी थिइन् । यसकै जवाफमा तापसीले कंगनालाई जवाफ दिएकी थिइन् ।
ट्रम्पले भने, ‘स्कूल पूर्ण रुपमा खोलियोस्’, तर उनकै छोरा पढ्ने स्कूलद्वारा राष्ट्रपतिको आदेश मान्न अस्विकार
tadalafil price – tadalafil pill sildenafil vs tadalafil
how to know if propecia is working – http://propechl.com/ buy propecia online with prescription
tadalafil online pharmacy – tadalafila 5mg medley menor preГ§o buy tadalafil pills
Xkbxip – Best price viagra best price for viagra
Mnzvhx – http://virviaga.com/ brand viagra
Pwkhmh – generic stromectol Zchzfm dihfdq
Vbmttr – lasix Jrpfbs saopih